समाचार - Teyeleec TC316A-RGB नयाँ शैली Fold-सक्षम RGB LED लाइट रिलिज हुनुहोस्!
Teyeleec TC316A-RGB नयाँ स्टाइल गुना-सक्षम RGB एलईडी लाइट रिलिज हुन्छ!
एक प्रसिद्ध कविताले भने "अँध्यारो रातले मलाई कालो आँखाको एक जोडी प्रदान गरेको छ, तर म तिनीहरूलाई ज्योति पाउनको लागि प्रयोग गर्दछु"। स्पष्टतया, प्रकाश हाम्रो दैनिक जीवनमा सधैं आवश्यक हुन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रयोग अन्तर्गत बिभिन्न प्रकाशहरू छन्। केहि घरको सजावटको लागि प्रयोग गरियो, केहि सडकको लागि प्रयोग गरियो, कोही बाहिरका गतिविधिहरू जस्तै क्याम्पि,, हाईकिंगका लागि प्रयोग गरियो। राती जब घाम लाग्यो, घाम अस्ताउँदै थियो, र दिन अन्त्य हुँदै थियो। हामी भेलगर, फोटोग्राफर र फोटोग्राफरिक फ्यानहरूको लागि प्रयोग गरिएको एक Teyeleec TC316A-RGB बाहिर लिन सक्छौं। डुअल एलईडी भिडियो लाइटहरू एक काजको साथ जडित छन्, दुबै तह र मल्टि-दिशाहरूको लागि कुंडा गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी केवल यो एक आराम उपकरण को रूप मा खेल्न सक्छौं।
जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, हालको बजारमा, एलईडी लाइट प्यानल अधिक र लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ, COVID-१ situation अवस्थाको कारणले, विभिन्न Led Video लाईट ल्यापटप भिडियो कन्फरेन्सिंग, जुम कलहरू, सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग, लाइभ स्ट्रिमिंग र अनलाइनका लागि प्रयोग गरिन्छ। शिक्षण! जब हामी यी गतिविधिहरूमा भाग लिन्छौं, सामान्य व्यक्तिको रूपमा, हामी यसलाई सुन्दर देखिन्छौं जुन LED लाईटको रंग रेन्डरिंग उच्च हुनको लागि चाहन्छ। TC316A-RGB का लागि, यो पुग्न सक्दछ2960Lux@0.5m , ह्यु ० डिग्री -360० डिग्री देखि समायोज्य; रंग संतृप्ति ०-११०० बाट समायोज्य, CRI ＞,,, TLCI ＞ Br Br चमक ०% -100% डिम-सक्षमबाट; र Color्ग तापमान २00०० के (तातो) बाट १२०००० (चिसो) सम्म। OLED प्रदर्शन सही रिडि read प्रदान गर्दछ र बटन / नबसँग अपरेट गर्न सजिलो।
हामी रचनात्मकताको अनुसरण गर्दैछौं! यो उत्तम र कम्प्याक्ट डिजाइन र सजिलो अपरेशनको साथ सबै-एल्युमिनियम बडी फोल्ड-सक्षम RGB फोटोग्राफी लाइटको एक नयाँ पुस्ता हो। Colors 360० र colors र १००-स्तर संतृप्ति समायोजन र दोहोरो रंग तापमान दीपक मोतीको साथ, पट सक्षम RGB फोटोग्राफी प्रकाशले विभिन्न र colorsहरू र दृश्यहरू प्रदान गर्दछ।
आजकल COVID-19 स्थिति अझै गम्भीर छ, धेरै कम्पनीहरु अझै पनी कार्यालय मा काम गर्न सक्दैन, त्यसकारण, घर काम एक रोजाई बन्छ। TC316A-RGB LED भिडियो लाइट हातमा छन्, हामी सबै आशा गर्दछौं कि तपाईं यसलाई आश्चर्यजनक र आश्चर्यजनक पाउनुहुनेछ, र तपाईं सधैं भविष्यको बारेमा सकारात्मक हुनुहुनेछ र त्यहाँ श doubt्का छैन कि सबैजना Teyeleec TC316A-RGB हातमा लिन इच्छुक छन्। ! यो संसार जस्तोसुकै होस्, हामीसँग अझै पनि हृदयमा हल्का प्रकाश छ!